मनाेरन्जन – Hamropati.com
रानीको सुटिङका लागि दीपिका पादुकोण नेपाल आउँदै
By on February 18, 2018 मनाेरन्जन
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म रानीको सुटिङका लागि नेपाल आउने भएकी छिन्। विशाल भारद्वाजको फिल्म रानीमा उनी ‘लेडी डन’को भूमिकामा छिन्। सन् १९८० को दशककी मुम्बईकी माफिया क्वीन रहीमा खान उर्फ सपना दिदीको जीवन आधारित फिल्म निर्माण हुन लागेको हो। सो फिल्मको केही दृश्य नेपालमा समेत सुटिङ हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। फिल्ममा […]
‘जिग्री र पाँडेले नै भद्रगोल छोडेर हिडेका हुन्’
By on February 14, 2018 मनाेरन्जन
नेपाली हाँस्य टेलिसिरियल ‘भद्रगोल’ मा भुकम्प आएको छ । यसका चर्चित कलाकारहरु ‘जिग्री’ अर्थात कुमार कट्टेल र ‘पाँडे’ अर्थात अर्जुन घिमिरे ‘आउट’ भएका छन् र भद्रगोलका पुराना निर्देशक शंकर आचार्य ‘इन’ भएका छन् । भद्रगोलमा किन यस्तो हेरफेर ? प्रस्तुत छ, यही विषयमा केन्द्रीत रहेर निर्देशक शंकर आचार्यसँग गरेको ५ प्रश्न – १. भद्रगोलमा तपाईको […]
बलिउडको ५ चर्चित हट किसिङ्ग सिनहरु, जुन रातारात भाइरल भए
भ्यालेन्टाइन विकको हरेक दिन फरक नामबाट चिनिन्छ र यस्तै एक दिन किस डे पनि छ। वास्तवमा प्राय: चुम्बनलाई बलिउडमा फिल्महरु हिट बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ सम्म कि केही सिनहरु फिल्मका लागि गरिएको थियो, ती सिनहरु पनि यादगार बने। आउनुहोस त्यसोभए यो दिनलाई अझ बढी विशेष बनाउन हामी तपाईलाई आज रियल लाइफमा बलिउड स्टार्सले खुल्लम-खुल्ला […]
हेर्नुहोस ‘भ्यालेन्टाइन डे’ तपार्इंकाे लागि कस्तो ?
मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो सिंह राशिप्रति आकषिर्त देखिन्छ। यो आकर्षण तत्कालका लागि बढी स्वप्निल हुन्छ। लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले अन्य राशिलाई पनि मन पराउन सक्छन्, यद्यपि त्यो आकर्षण प्रेमका कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आकर्षणको अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ। जे […]
किन रातारात भाइरल भईन् यी युवती ? (फोटो/भिडियो)
By on February 12, 2018 मनाेरन्जन
एजेन्सी – समाजिक संजालमा एक युवतीको तस्वीर भाइरल भइरहेको छ । इन्स्टाग्राममा उनी ट्रेन्डिङमा परेकी छिन् । युवतीको हेराई निकै लोभलाग्दो भएको भन्दै ट्वीटरमा पनि उनको नाम शीर्ष १० मा छ । धेरैले उनको तस्वीरमा लोभलाग्दा कमेन्ट पनि गरेका छन् । उनी भारतको मलयाली नायिका प्रिया प्रकाश वारियर हुन् । १८ वर्षीया प्रिया केरलको त्रिशुरमा […]
राशि अनुसार यस्तो हुन्छ “भ्यालेन्टाइन डे”
By on February 11, 2018 मनाेरन्जन
प्रेमका केही नियमहरु
By on February 10, 2018 मनाेरन्जन
काठमाडौं – ज-जसले प्रेम गरे उनीहरूले नियम जानेर वा मानेर कहिल्यै प्रेम गरेनन् । प्रेममा परुन्जेल उनीहरूलाई लाग्यो, प्रेमको न त परिभाषा हुन्छ न यो नियममै बाँधिन्छ । जब कोही प्रेमबाट बाहिर हुन्छ र उसले प्रेम गर्नेहरूको जीवनलाई अध्ययन गर्न थाल्छ, उसले आफूलाई कुनै न कुनै नियममा बाँधिएको पाउँछ । केही वर्ष यता प्रेमी–प्रेमिकासँग गरिएको […]
‘कृ’ अाजबाट दर्शकमाझ
By on February 9, 2018 मनाेरन्जन
काठमाडौं : नेपाली चलचित्र उद्योगमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा प्रतीक्षित चलचित्रका रूपमा कुरिएको अनमोल र अदिति स्टारर चलचित्र ‘कृ’ शुक्रबारबाट दर्शकमाझ आएको छ । यो चलचित्रले गर्ने व्यापारलाई नेपाली चलचित्रको टर्निङ पोइटका रूपमा पनि हेरिएको छ।दृश्यका मागअनुसार छायांकन गरिएको र कलाकारलाई दृश्यअनुसार तयार गर्न पनि लामो समय खर्चिएको हुनाले चलचित्रको लागत सामान्यभन्दा निकै बढी छ।त्यसैले यसले गर्ने […]
चलचित्र ‘जात्रा’ युट्युबमा पनि हिट (फिल्म सहित)
By on February 5, 2018 मनाेरन्जन
काठमाडौं– प्रदीप भट्टराईको लेखन तथा निर्देशन रहेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘जात्रा’ युट्युबमा पनि हिट बन्नै गएको छ । नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङमा नम्बरमा एकमा आईपुगेको छ । नेपाली सिनेमा हलमा ५१ दिन मनाउन सफल रहेको ‘जात्रा’चलचित्र हाइलाइट्स नेपालको युटुब मार्फत सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै युट्युब ट्रेन्डिङमा नम्बरमा एकमा आएको हो । यो समाचार तयारपर्दा चलचित्र […]
बन्द हुने भयो भद्रगोल टेलिफिल्म ।
By on February 4, 2018 मनाेरन्जन
काठमाडौं । चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला भद्रगोल भन्द हुने भएको छ । भद्रगोलका मुख्य कलाकार तथा एक निर्देशक अर्जुन घिमिरे (पाँडे) ले भद्रगोल बन्द हुने बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेखेका छन्, अबदेखि भद्रगोलका पाईला यही बिन्दुबाट बिश्राम गर्ने कोसिस गर्न लागेका छौँ । घिमिले उक्त स्टाटसबाट उत्पादक कम्पनी मिडिया हबमाथी पनि […]